Gaas Oo La Kulmay Saraakiil Ciidan Oo Cusub+Sawirro. – SBC
Gaas Oo La Kulmay Saraakiil Ciidan Oo Cusub+Sawirro.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa gelinkii dambe ee maanta aqalka Madaxtooyada dawladda Puntland ee Garoowe kullan kula qaatay saraakiil ciidan oo katirsan ciidanka Puntland, kuwaasi oo dalka dibadiisa gaar ahaan Dalka Ethiopia ku soo qaatay tababar.
Saraakiishaan ciidan oo soo dhamaystay tababarka ay qaadanayen ayaa dalkooda ugu soo laabtay sidii ay dadkooda iyo dalkooda ugu faa’iideyn lahaayen cilmiga ay soo barteen.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa uga mahadceliyey dawladda Ethopia tababarka ay siisay saraakiishan ciidan oo udub dhexaad u ah ciidanka Puntland, waxaana uu kula dardaarmay in aqoonta ay soo barteen dib dalkooda ugu celiyaan.
Wajiyada Saraakiishan ayaa laga dheehan karay farxad iyo rey reyn, maadama ay fursad u heleen in dalka dibadiisa ay wax ku soo bartaan, iyagoona kalsooni buuxda ku qaba dawladda iyo shacabkooda isbadal horumarineed la imaan doona.
Saraakisha soo qaatay tababarka waxaa ay dhankooda sheegeen inay diyaar u yihiin ka qeyb qaadashada kor uqaadista tayada iyo waxbarida ciidanka Puntland, kana dhabeynayaan difaacida dadkooda iyo dalkooda.
Dawladda Puntland ayaa dadaal dheeri ah ugu jirta sidii guud ahaan ciidanka Puntland u heli lahaayen tababar dhamaystiran oo ay wax uga faa’iidaysanayaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa.
Kor uqaadista tayada aqooneed ee guud ahaan ciidanka Puntland waxay qeyb ka ahayd balan qaadyadii Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaana cad in waxbadan ay balan qaadyadiisi ka fuleen.